चौंरीदेउरालीमा दलित र किसानलाई आर्थिक अनुदान | नमोबुद्ध न्युज
ब्रेकिङ समाचारचौंरीदेउरालीमा दलित र किसानलाई आर्थिक अनुदान
चौंरीदेउरालीमा दलित र किसानलाई आर्थिक अनुदान
चौंरीदेउराली । काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. ५, चौंरीका दलितहरुलाई, सुधारिएको आरान, आर्थिक अनुदान र पञ्चेबाजा वितरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वडाको दलित उत्थन तथा आय अर्जन योजना अन्तर्गत यसरी वितरण गरिएको हो ।
वडा अध्यक्ष राजकुमार गौतम (आयुश)ले वडा कार्यालयमै एक कार्यक्रमका बीच वितरण गरिएको थियो ।
दलितहरुलाई कर्नल २ थान, सनाई २ थान, २ वटा दमहा, ट्याम्को १ थान, ढोलक १ थान, झ्याम्टा १ जोडी लगायतका बाजाका सामाग्री वितरण गरिएको थियो ।
दलित समुदायको आय अर्जनमा टेवा पनि पुग्ने र परम्परागत बाजागाजा सँस्कृतिको पनि संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त सामाग्री वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष गौतमले बताए । ‘दलितलाई आत्मनिर्भर बनाउन आयअर्जनको बढाउन हामीले यस्तो योजना बनाएका हौं ।’ गौतमले भने, ‘दलित समुदायको आय अर्जनमा टेवा पनि पुग्ने र परम्परागत बाजागाजा सँस्कृतिको पनि संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हामीले उहाँहरुलाई चाहिने बाजागाजाका सामग्री वितरण गरेका हौं ।’
परम्परागत आरानलाई विस्थापित गरि आधुनिक आरानको व्यवस्थापन गर्न आफूहरुले सुधारीएको आरान वितरण गरेको वडा अध्यक्ष गौतमले बताए ।
त्यस्तै दलितहरुको दुई वटा बंगुर पालन फर्मलाई पनि २ लाख रुपैयाँ रकम अनुदान दिएको छ । सो क्रममा चौंरीदेउराली बंगुर फर्मका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सुलिकोट बंगुर फर्मलाई ५० हजार रुपैयाँ रकम अनुदान दिएको थियो । आय अर्जनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोड्दै आत्मनिर्भर र स्वरोजगार सिर्जना गर्न अनुदानको कार्यक्रम पनि ल्याएको उनले बताए ।
‘हामीसँग परम्परागत शिप मात्र छ, जसको कारण व्यबसायीक रुपमा बंगुर पालन गर्न सकेका छैनौं । दलित समुदायलाई हामी स्वरोजगार बनाउदै आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौं ।’ वडा अध्यक्ष गौतमले भने, ‘बुंगुर पालनलाई आाधुनिक र व्यवसायिक बनाउन उहाँहरुलाई अनुदान दिएका छौं । हाम्रो सानो सहयोगले उहाँहरुलाई टेवा पुग्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछौं ।’
यसैबीच आफ्नो समूहलाई बाजागाजा पाएपछि हिराबहादुर नेपाली खुशी भएका छन् । बाजागाजाको अभावका कारण परम्परा र सँस्कृति नै जोखिममा रहेको बेला यसरी बाजागाजा पाएपछि उनी खुशी भएका हुन् । ‘बाजागाजा नभएर हाम्रो आय अर्जन नै धरापमा परेको थियो ।’ नेपालीले भने, ‘अब परम्परा र सँस्कृति पनि जोगिने भयो, आय अर्जन पनि बढ्ने भयो ।’
त्यसैगरी स्थानीय सरोज रसाईली पनि आधुनिक र सुधारीएको आरान पाएपछि खुशी भएका छन् । एकातिर स्वरोजगार हुने र अर्को तिर सुधारीएको आरानले बढी काम गर्न सक्ने भएकोले आरान दिएकोमा वडा कार्यालयलाई धन्यवाद समेत दिए । ‘किसानहरु कृषि औजार बनाउन शहर तिर धाउन थाले । हामीसँग परम्परागत आरान मात्र थियो ।’ खुशी हुँदै रसाईलीले भने, ‘अब त्यस्तो समस्या आउँदैन । आरान पाएपछि पेशा र आय अर्जन बृद्धि भइ स्वरोजगारको ग्यारेन्टी भयो । वडा वडा अध्यक्ष ज्यूलाई धन्यवाद ।’
८६ किसानलाई गाई भैंसी सुत्केरी भत्ता
त्यसैगरी कार्यक्रममा ८६ जना किसानलाई गाई भैंसी सुत्केरी भत्ता समेत वितरण गरेको छ । उनीहरुलाई १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरिएको हो ।
भैंसी पालनको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न र किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप भैंसी सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष गौतमले बताए ।
यस अघि पनि सो वडाले १ सय ३ जना किसानलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरेको थियो । भैंसी सुत्केरी भत्ता पाएछि स्थानीय किसान यम प्रसाद गौतम खुशी भएका छन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने यो नौलो योजना प्रति उनी खुशी छन् । ‘कहीं नभएको योजना यहाँ बनाएको रहेछ, अत्यन्तै नौलो काम लागेको छ ।’ गौतमले भने, ‘मान्छेलाई त सुत्केरी भत्ता पाएको सुनेको तर भैंसीलाई पनि दिने प्रचलन ल्याएकोमा खुशी लागेको छ । हामी किसानलाई यो योजनाले प्रोत्साहन मिलेको छ ।’
चौंरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. ५ कोशीपारी क्षेत्रकै सबैभन्दा बढी भैंसीपालन गर्ने वडाको रुपमा यो वडालाई चिनिन्छ । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष ताराकुमारी चौंलागाईं, वडा सचिव अनिलराज गिरी, वडा सदस्यहरु बाबुराम चौंलागाईं लगायतका सहभागी थिए ।